ईन्टरनेटमा पासवर्ड विर्सिनुभयो ? 'नो टेन्सन' | मेरो कलम
– कम्प्युटरको ओपन वटम प्रेस भएसगै कुन कुन साईट भिजिट गर्नुहुन्छ ? पहिल्य लगईन गर्ने भनेकै फेसवुक हुनुपर्छ त्यसपछि ट्वीटर, जिमेल, स्काईप, याहु एवं व्लग बेवसाईट ईत्यादी । साधारणतया यती साईटहरु एक व्यक्तिले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्दै आएका हुन्छन् । ईन्टरनेटसगँ सम्वन्धीत रहेर काम गर्ने हरुको हकमा भने धेरै नै साईटहरु लगईन गरिरहनु पर्ने हुन्छ । ईन्टरनेट कनेक्ट गरिएको अफिसमा पनी आफ्नो त छदैछ अफिसको पनी फेसवुक, ट्वीटर, जिमेल, बेवसाईट, लगायत धेरै साईटहरु खोलिरहनु त पर्छ नै । यतिका धेरै साईट लगईन गरिरहदा के पासवर्ड त सजिलै सम्झिन सक्नुहुन्छ ?
कसै कसैले त डायरीमा लेखेर आफु जहाँ तयो त्यहि बोकेर हिडिरहेका पनी हुन्छन् । सम्झनै गाह्रो हुने गरी साईटहरु लगईन गरिरहुनभएको छ भने समस्याको समाधान के त ? चिन्ता नलिनुस्, तपाईले रोवो फर्मको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । रोबो फर्म (Roboform) पासवर्ड सम्झाउने सफ्टवेयर हो । विश्वका दशौ लाख मानिसले यो सफ्टवेयरको प्रयोग गरिरहेका छन् । डेक्सटपका साथै मोबाईलमा पनी यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सकिन्छ । अनि धेरै अपरेटिङ सिस्टमलाई सपोर्ट गर्ने गर्दछ । विश्वको नम्वर एक पासवर्ड सम्झने सफ्टवेयर भएको रोबो फर्मले दावी गरेको छ ।
निशुल्कै हो त ?
यदि तपाई दश वटा साईट सम्ममा रोबो फर्मको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो निशुल्क हो । भन्नाले तपाई फेसवुक,ट्वीटर,जिमेल,याहु,स्काईप गर्दै दशवटा साईटसम्ममा पासवर्ड सम्झन यसले निशुल्क काम गर्ने गर्दछ । दशभन्दा वढी जतिपनी साईटमा पासवर्ड सम्झिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने चै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । वार्षिक दश डल्लरको हाराहारी देखी भुक्तानी गर्नुभयो भने यसले पासवर्ड सम्झने काम त छदैछ अन्य धेरै काममा सपोर्ट गर्ने गर्दछ ।
काम काईदाकै गर्छ त ? भिडियोमा हेर्नुस् न ।
पैसा तिर्ने काम पछि गरुला अहिल्य सित्तैमा पाईने सेवा सुविधा चै डाउनलोड गरुन त भन्ने लाग्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुस् ।